‘हिसाब’ भन्ने वित्तिकै ‘पिसाब’ आउँछ ! उखान कै रुपमा स्थापित भै सकेको छ यो भनाई । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा एसएलसीमा मात्रै हैन उच्च माध्यामिक तहका परीक्षाफलको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने पनि गणितकै कारण नतिजा खस्केको पुष्टि हुन्छ । झट्ट हेर्दा गणित बेस्वादको विषय ! विभिन्न सूत्र र साध्य घोक्नु पर्ने निरस विषय !